Iintsapho ezininzi zikhetha indlela ye-eclectic kwindlela yokufundela ekhaya - ukuthatha izinto ezizithandayo ukusuka kwindlela nganye yokufundela ekhaya ukudibanisa isitayela esisodwa esisodwa esilungelelanisa intsapho yabo.
Unokukhetha iinkalo ezimbalwa zesitayela seCharlotte Mason, ukucwangcisa okufutshane, kunye nokugxotha kwezinye iingcamango ezingenakufunda. Yongeza kuloo nto inomxholo wekharityhulam kwaye uqhutywe ngezindlu zasemakhaya ezahlukileyo kwizinto zombini kunye nezibonelelo.
Inkqubo yokufunda ingqondo yesikhalazo kubheno baninzi kubafundi bezindlu kuba zihamba ngezandla, ngokuhambelanayo nendlela yokuhlala ekhaya. Inika uxolo lwengqondo yokwazi ukuba abantwana bakho bahlanganisa izihloko 'abafanele bazi' ngemigangatho.
Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi into oyithandayo njengendlela yakho ephambili, unokudibanisa kwezi ndlela zokufunda zunithi ukuphucula nayiphi na isitayela sasekhaya.
Yenza uxhulumaniso phakathi kwezifundo
Iingcamango eziphambili emva kokufundwa kweeyunithi ukubopha zonke izifundo kwiyunithi nganye yokufunda kumxholo oyintloko. Oku kungabonakala kungenakwenzeka ukwenza nezinye izitayela zokufunda ekhaya, kodwa xa ufumana ukuxhoma kwayo, unokufumanisa ukuba kuyamangalisa ukuba kulula. Kuphela umcimbi wokuhlawula nokufundisa abantwana bakho ukwenza okufanayo.
Ungabhekisela kubantwana bakho ukuba isiganeko ofundayo kumbali sichaphazela kukufumanisa kwenzululwazi oyifundileyo ngokusesikweni kwisicatshulwa sakho sesayensi okanye indlela i-Pythagorean theorem oyisebenzisayo ngayo kwimathematika yenziwa ngumfundi weziGrike wezibalo, uPythagoras oye wafunda xa ufunda iGrisi yamandulo .
Ifilosofi yeCharlotte Mason yezemfundo iquka ingcamango yokuba imfundo yenzululwazi yezobudlelwane kunye nabantwana banako ukwenza udibaniso lwabo xa benolwazi olufanelekileyo kunye namava. Ngoko ke, uCharlotte Mason uhlambulukile ekugqibeleni ukubonisa ukuxhamla kwabantwana, kodwa ukwenza oko kunokubonisa umxholo kunye nokubanceda bafunde ukwenza udibaniso ngokwabo.
Kungakhathaliseki ukuba yintoni isakhiwo sakho sasekhaya, indlela enkulu yokuphucula ukufunda kukufunda iincwadi ezinxulumene nazo. Ukuba ufunda iMfazwe Yehlabathi II, unokufunda uAnn Frank: Idayari yeNtombazana encinane . Ukuba ufunda i-American Revolution, unokufunda uJohnny Tremain .
Isitayela sakho sasekhaya okanye ikharityhulam yakho inokuthi ifake ukufundwa ngokubelwe, kwaye awufuni ukuphinda ulayishe umfundi wakho ngaphezulu, ngoko-ke, cinga ukufaka iincwadi ezonwabileyo. Umfundi wakho unokunandipha uluhlu olunjengokuthi Ungafuni Ube ... , Ubani ... , okanye Iimbali Ezibuhlungu .
Zama kwakhona iincwadi zomsindo. Wena kunye nezingane zakho ziyakwazi ukuphulaphula imoto njengoko uhamba ngeendlela okanye uhambo oluya ezikolweni. Abantwana bakho banokuyithanda ukuphulaphula xa besenza imisebenzi enokuthula njengomdwebo okanye ukwakha nge-LEGOs.
Zama ezinye iiProjekti zeeNtloko
Ziyinqaku eliphawulekayo kwindlela yokufunda yunithi, kodwa kulula ukuyongeza imisebenzi yokufunda ngezandla kunoma yimuphi umzi wesikolo. Ndiyazi ukuba ndihlala ndiqhuba iiprojekthi ezinjalo, kodwa ngenxa yokuba zongeza kakhulu umdlalo kwintsapho yakho efundayo kwaye inceda ekugcineni ngokubandakanya abantwana bakho kwisihloko esiphezu.
Izinto ezimbini ezibaluleke kakhulu ukuzikhumbula malunga neeprojekthi zezandla kukuba akufuneki kube nzima kwaye akudingeki wenze ezininzi zazo.
Khetha iprojekthi enye engacokisiyoyikisayo kakhulu kwimiba ethile yento ofundayo. Ngokomzekelo, ukuba ufunda indawo ethile kwimfundo yakho yembali, zama imephu ye-salt dough. Unokongeza kancinci kwinqanaba lesahluko okanye kwiyunithi.
Ukuba ufunda i-volcano kwisayensi, zama i- volcano e-baking-soda-ne-vinegar elula. Ukufunda ngomculi othile? Zama ukuphindaphinda umzobo ngesitayela sakhe.
Unokuyonwabela nezinye iiprojekti zezandla zamatriki. Ukuba abantwana bakho bafunda iigrafu zebhayibhile, yenza uphando olulula lwabahlobo kunye nezihlobo, ubacele ukuba baqambe i-flavour yabo eyintandokazi kwaye baququzelele iziphumo ukubonisa kwigrafu yebar.
Ukuxhaswa kweMithwalo Yomfundi Wakho
Inzuzo yokulandela indlela yokufunda yunithi ikwazi ukulandela abafundi bakho ekukhothweni kwesihloko.
Ngokomzekelo, unokuyonwabela isifundo seyunithi ngesihloko samahashe ukuba umntwana wakho uyathandwa yizinto zonke ezilinganayo.
Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi into oyifumene ngayo njengesitayela sakho sasekhaya esiyintloko, kulula ukuthabatha isicatshulwa kwii-junkies zeeyunithi. Ukuxhamla kwiminqweno yomfundi wakho ngokudala indawo ecebileyo yokufunda . Yenza ingqalelo zezihloko ezizayo kwikharityhulam yakho ekhethiweyo kwaye unikele ngezixhobo kwezi zihloko. Ukuba ngaba umfundi wakho oyisisiseko uqaliswa kwi-chemistry, qwalasela ukuthenga isetyenzana samakhemikhali okwenza umonakalo, uvavanyo olukhokelwa ngumdla.
Ukuba iMfazwe yombutho iya kuhlanganiswa kwimbhalo yakho yembali, qwalasela ukukhangela ezinye iibrajografi zamanani abalulekileyo avela kwithala leencwadi okanye ukuthenga ikiti ukuze wenze imodeli yesimodeli.
Ukuba ungumkhaya wezilwanyana, mhlawumbi sele usuphethe kakuhle, kodwa xa usentsha, qwalasela iziganeko zangoku kunye neziganeko zonyaka kunye nemisebenzi xa uhambisa izixhobo kulo lonke ikhaya lakho.
Thatha uhambo oluhambelanayo lomhlaba
Zama ukuqeda phantse yonke i-unit study kunye nohambo lwentsimi enjani. Kungakhathaliseki ukuba uhlala njani ekhaya, ukuhamba kwintsimi kuyindlela ephumelelayo yokufumana ukuqonda kokuqala kwesandla esinye okanye ezininzi zezihloko zakho zokufunda. Ukuba isicatshulwa somfundi wezentlalo sithatha abantu abancedisayo okanye bavuselela kwakhona, cinga uhambo oluya kwisebe lamapolisa, kwisikhululo somlilo okanye kwindawo yokubuyisela. Ukuba ufunda malunga nabahambi ngeehambo kwaye usondele ngokukhawuleza, tyelela eJamestown okanye eWilliamsburg.
Kukho amaninzi amanqaku amangalisayo awenzayo nganye yeendlela ezahlukeneyo zasemakhaya.
Ngaphandle kokuba ungokoqobo lwenkqantosi yakho yeendlela zasemakhaya, ungesabi ukuxuba kwizinto ozifunayo kwabanye.
Ukusondela phantse nayiphi na isitayela kunye nokufunda kwengqondo yunithi kuvumela ukulandelelana nomdlala womfundi wakho kumzila yendlela yomvundla, ukwenza ukudibanisa onokukuphosakela, kunye nokongeza kwizinto ezongezelelweyo ezifana neencwadi ezinkulu kunye nokuhamba kwintsimi.
Iindlela ezi-3 ezisebenzayo zokuba zilungelelanisa iiKhaya zoLwazi lwezeMakhaya
Iingcebiso ezili-10 zokukhuthaza abaBhali abahlukumezayo
IsiTshintsho sesithandathu seNkundla ePhakamileyo
Indus Inkqubela yexesha kunye neNkcazo
Isihlandlo seRussia Revolutions: 1905